NCA-S EAO | News
Posted By Nay Myo Kyaw |
(၈) ကြိမ်မြောက် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘာတူစာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ညှိ နှိုင်းအစည်းအ၀ေး (JICM) အပြီးတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ပူးတွဲ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် NCA-S EAO JICM အစည်းအ၀ေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းငင်း၏ မီဒီယာများသို့ ဖြေကြားချက်များမှ ကောက်နုတ်ချက်- ******************** ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဥ်မှာ အားလုံးပါ၀င်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး- ကျွန်တော်တို့ ၁၀ဖွဲ့အပိုင်းက အားလုံးပါဝင်ရေးဆိုတဲ့ အခင်းအကျင်းက အရမ်းအရေးကြီးတာကိုး။ ၁၀ဖွဲ့တည်းနဲ့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူး။ ဆိုတော့ ကျန်တဲ့ အဖွဲ့တွေသည် အဝန်းအဝိုင်းထဲပါလာအောင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့...
NCA-S EAO Office requiresahighly dedicated and deserving candidate for the following position:Position----------Guard - (1 post) For more details on above-mentioned position, please kindly see the following link:http://themimu.info/sites/themimu.info/files/jobs/Guard_17.Dec_.2019.pdf
Job positions for Cashier and Senior Officer- Validation & Compliance
NCA-S EAO Office requiresahighly dedicated and deserving candidates for the following positions:Positions------------Senior Officer – Validation & Compliance (1 post) Cashier (1 post) For more details on above-mentioned positions, please kindly see the following links: http://themimu.info/sites/themimu.info/files/jobs/Cashier_01_Dec_2019.pdf http://www.emimu.info/files/jobs/Senior_Officer-Validation_Compliance_1_Dec_2019.pdf
The Statement of PPST Meeting (06/ 2019)
Job positions for Legal Study Team
NCA-S EAO Office requiresahighly dedicated and deserving candidates for the following positions:Positions------------Manager (Legal Study Team) 1 postSenior Officer (Legal Study Team)2postsFor more details, please kindly see the following links:https://themimu.info/…/fi…/jobs/Manager_Legal_Study_Team.pdfhttps://themimu.info/…/…/Senior_Officer_Legal_Study_Team.pdf
Nationwide Ceasefire Agreement – Signatory, Ethnic Armed Organizations Peace Process Steering Team (PPST) Meeting Statement No. 05/2019 October 12, 2019 ********** 1. Meeting No. 05/2019 of the Peace Process Steering Team (PPST) of the Nationwide Ceasefire Agreement –...
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ငြိမ်း ချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး (၀၄/၂၀၁၉) ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၅) ရက်********************၁။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်မှ ၂၅ ရက်နေ့အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ သည့် တစ်နိုင်ငံ လုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်ကို လက် မှတ်ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ (NCA-S EAO) ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST+2) အစည်း အဝေး(၀၄/၂၀၁၉)သို့...
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ (NCA-S EAO) ၏ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် NCA-S EAO အတွင်းပိုင်း ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဇူလိုင်လ (၁၁) ရက်နေ့တွင် NCA-S EAO UPDJC အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် ရဲဘော်မျိုးဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့သည်များကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။မေး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင် (၅) ရက်ကနေ (၇) ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ (စတုတ္ထအကြိမ် NCA-S EAO ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့) အလုပ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ ဘယ်လို အကြောင်းအ...
Government representatives and NCA-S EAO...
2nd NCA-S EAO's Land, Natural...
13th NCA-S EAO's Social Sector Working Committee meeting held through online video conference
13th NCA-S EAO's Social Sector...
Workshop on "Indian Constitution and...